किन बढी रुचाइयो हीरा ? - बजार रिपोर्ट - नारी
किन बढी रुचाइयो हीरा ?
निर्देशक, पद्मश्री ज्वेलर्स, न्यूरोड
अहिले महिलाहरूले हीराको टप र सिंगल डायमण्ड फिंगर रिङ बढी मन पराएका छन् । दैनिक प्रयोगमा आउने स–साना डिजाइनका पेन्डेन्ट पनि अहिलेका महिलाहरूको रोजाइमा परेका छन् । सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुने हीराका गहनाको बिक्री बढिरहेको छ ।
अलिकति बढी पैसा परोस् तर स्टोनमा हीरा नै प्रयोग गरौं भन्ने सोच नेपाली महिलाहरूमा समेत बढिरहेको छ । महिलाहरू हीराप्रति आकर्षित हुनुको कारण यसको सुलभ मूल्य तथा हीराको महत्व बुझ्न थाल्नु नै हो । यो कहिल्यै नष्ट नहुने भएकाले जीवनभर रहिरहन्छ ।
सुन आगोले पग्लिन्छ, टुक्रिएर जान्छ तर हीरा जति राख्यो उति मूल्यवान् हुँदै जान्छ । यो अमूल्य र कहिल्यै नाश नहुने रत्न हो । रिसेल भ्यालु बढ्दै जाने मात्र होइन हीरा लगाउँदा क्लासी लुक्स पनि प्राप्त हुन्छ भने यसले स्ट्यान्डर्डसमेत मेन्टेन गर्छ । यी सबै कुरा बुझ्दै गएकाले अहिले नेपालमा हीराको माग बढिरहेको छ ।
पुस १९, २०७४ - बढी चिसोमा के हुनसक्छ ?
पुस ४, २०७४ - बढी चिसोमा के हुनसक्छ ?
मंसिर ३, २०७४ - महिलालाई चुनाव किन ?